Nidaamka digniinta dhawaaqa wuxuu dacwad ka helaa ADT | Waxaan ka socdaa mac
Nidaamka digniinta dhawaaqa wuxuu ka helaa dalab ADT
Dhowr maalmood ka hor waxaan dhammaantiin ka wada hadalnay war muhiim ah oo ku saabsan nidaamka digniinta Gamba. Qodobkaan waxaad ka aqrisan kartaa soo bandhigida jiilka labaad ee Qaylo dhaanta iyo seeriga banaanka "Sirenka Banaanka Digniinta" taas oo u muuqata in dacwad cusub ay ku soo rogtay shirkadda amniga iyo digniinta ee ADT.
Waxay u muuqataa in dalabkani asal ahaan ka soo jeedo naqshadda buluuga iyo caddaanka ah ee siddeed dhawaaq ee dibadda. Shirkaddan ka sokow, ADT, waxay horey dacwad ugu gudbisay Ring sababo kale awgood waqti yar kahor maxaa yeelay muranka dhexdooda ayaa u muuqda mid caam ah.
Xaqiiqdii, haddii aan eegno labada astaan ​​ee ADT iyo naqshadda seeriga banaanka ee Ring (sawirka kore) waxaan ogaanay inay leeyihiin waxoogaa iska mid ah inkasta oo aysan gabi ahaanba isku mid ahayn ... saxeex ama ku dheji qaab sideed geesood ah oo aad ku akhrin karto "Badbaado Giraan" taas shirkaddu waxay bilowday inay iibiso sanadkii 2016-kii maantana waxay ku dartay qalabyada sida digniinta digniinta ah ama kamaradaha wax lagu ilaaliyo.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii ADT ay ka cawday calaamadda, Ring wuxuu oggolaaday inuu beddelo midabka iyo naqshadeynta xoogaa markaa ADT ma aysan qaadin wax tallaabo dheeri ah waqtigaas. Hal sano ka dib 2017 ka hor inta Amazon aysan helin Ring, ADT waxay xareysay dacwad cusub oo ay ku andacooneyso in Ring uu ka macaashay sirtiisa ganacsiga ka dib markii la helay shirkad ay ADT horay u maalgashatay
Hada isbarashada dhexe qarka u saaran y Bloomberg muuji dacwad rasmi ah oo ay soo gudbiso ADT taas oo aad ka akhrisan karto sida ay u weydiiso garsooraha federaalka ee Florida, inuu isla markiiba ku amro Ring inuu joojiyo isticmaalka astaamaha isku midka ah ee alaabteeda. Waxyaabahaas oo dhami waa kuwo xiiso leh maaddaama labada shirkadoodba ay ku dhowaayeen inay ka wada shaqeeyaan mashruucan amniga guriga, ADT wali way la jaanqaadi kartaa Amazon sida Ring uu yahay laakiin xiriirka labadooda ayaa umuuqda mid taabanaya dhimashada dalabkan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Nidaamka digniinta dhawaaqa wuxuu ka helaa dalab ADT
Apple wuxuu helaa ogolaansho si loogu iibiyo TV-ga Apple ee Shiinaha oo leh xadad badan
Waxaan ka tijaabinay Choetech saldhiga lacag bixinta magnetic dukaanka Lululook